Usoro - Imewe Mmewe
Tọọzdee 19 Ọgọọst 2021
Transformative Taya N’oge na-adịghị anya, mgbalite mmepe njem ụgbọ ala eletrik dị n’ọnụ ụzọ. Dịka onye mepụtara ụgbọ ala, Maxxis na-eche echiche etu ọ ga - esi chepụta usoro smart nwere ike itinye aka na omume a ma nyere aka mee ngwa ngwa. T Razr bụ taya mara akpụ mepụtara maka mkpa ọ dị. Ndị wuru ya wuru na-achọpụta ọnọdụ ịnya ụgbọ ala dị iche iche ma na-enye akara ndị nọ n'ọrụ iji gbanwee taya. Egosipụta a sara mbara na-agbatị ma gbanwee mpaghara kọntaktị na nzaghachi na mgbama ahụ, ya mere melite ọrụ traction.
Ọrụ Nkwanye Egwu
Wenezdee 18 Ọgọọst 2021
Ọrụ Nkwanye Egwu Musiac bụ igwe na-atụ aro maka egwu, jiri ikere òkè na-achọ ihe iji chọta nhọrọ dịịrị ndị ọrụ ya. Ebumnuche ya na-ewebata uzo ihe ozo iji maa ihe banyere ikike algorithm. Nzapu ozi aghọọla ụzọ nyocha enweghị atụ. Agbanyeghị, ọ na --emepụta nsonaazụ ụlọ ma na - egbochi ndị ọrụ na mpaghara nkasi obi ha site na iji obi ike soro usoro ha. Ndị ọrụ na-eme ihe n'echeghị eche ma kwụsị ịgbagha ajụjụ nhọrọ igwe ahụ na-enye. Ending wepụta oge iji tụlee nhọrọ nwere ike ịbawanye oke-akwụ ụgwọ bio, mana ọ bụ mbọ ahụ na-eweta ahụmịhe bara uru.
Piano Ngwakọ Okpokoro
Tiuzdee 17 Ọgọọst 2021
Piano Ngwakọ Okpokoro EXXEO bụ Piano gbacha gbacha maka oghere dị ugbu a. Ọdịdị pụrụ iche na-atọzi akụkụ atọ nke ụda ebili mmiri. Ndị ahịa nwere ike ịhazi piano ha n'ụzọ zuru ezu ka ha kwekọọ na gburugburu ya dị ka ibe a chọrọ Mma. Emere ụdị piano a dị elu sitere na ihe ndị dị ka Carbon Fiber, Akpụkpọaka Automotive Akpụkpọ anụ na ọkwa Aerospace Aluminum. kpọghachite usoro sara mbara nke Grand pianos site na 200 Watts, 9 sistemụ ụda okwu 9. A raara ya nye batrị ahụ arụziiri na-enyere piano aka ịrụ ọrụ ruo elekere iri abụọ na otu ụgwọ ọrụ.
Mọnde 16 Ọgọọst 2021
Ile Ọbịa Serenity Suites dina na Nikiti, ebe obibi Sithonia na Chalkidiki, Greece. Ihe mejuputara ya bu nkeji ato nke nwere ime ulo iri abuo na ebe igwu mmiri. Unitslọ ụlọ ahụ na-egosipụta oke ọdịdị nke mbara igwe ma na-enye echiche dị mma maka oke osimiri ahụ. Ebe igwu mmiri bu isi di na etiti ebe obibi na ihe ndi eji enyere mmadu aka. Lọ ọrụ ile ọbịa bụ ihe ama ama na mpaghara ahụ, dịka shea na-apụ apụ nwere njiri mara.
Mmemme Nke Ihe Omume
Mbọsị Ụka 15 Ọgọọst 2021
Mmemme Nke Ihe Omume ihe ngosi, asọmpi a haziri ahazi, ihe omumu, ihe omuma banyere ihe omuma na ibiputa ihe bu n’obi iji kwalite ndi mmebe Russia na akara di na mba ozo. Ihe omume anyị na-akpali ndị na -ekwu asụsụ Russian iji zuo oke ihe ọmụma ha na nkà ha site na ọrụ ndị mba ụwa ma nyere ha aka ịghọta ọrụ ha na imebe obodo, otu esi akwalite ma na-eme ka ngwaahịa ha na asọmpi, ma mepụta ezigbo ihe ọhụụ.
Ihe Ntinye Koodu Kr
Satọdee 14 Ọgọọst 2021
Ihe Ntinye Koodu Kr Wayzọ ọhụụ iji ree ụgbọ ala gị ebe niile! Naanị na www.krungsriautomarketplace.com ebe ị nwere ike biputere iji ree ụgbọ ala gị, anyị ga-emepụta QR code Sticker dabere na adreesị weebụ gị pụrụ iche, site na iji akwụkwọ mmado ị họọrọ wee nyefee ebe gị ka ị nwee ike itinye ihe mkpado na ụgbọ ala gị! !! Maka yerzụ ahịa, sọsọ mpịnụ koodu QR ị hụrụ n’ebe a na-adọba ụgbọala n’ebe a na-adọba ụgbọala, ụlọ ahịa kọfị, ụlọ, wdg. Nweta nkọwa ụgbọ ala ozugbo. Kpọọ onye na-ere ya ma lelee ya. Ihe niile mere na mberede ebe ebe unu abụọ no !!!
Calendar 2014 “Botanical Life” Kalenda Satọdee 18 Septemba
Calendar 2014 “Farm” Kalenda Fraịdee 17 Septemba
Calendar 2014 “Town” Kalenda Tọọzdee 16 Septemba
Transformative Taya Ọrụ Nkwanye Egwu Piano Ngwakọ Okpokoro Ile Ọbịa Mmemme Nke Ihe Omume Ihe Ntinye Koodu Kr